जमिन मुनिको मानिस पनि पत्ता लगाउन सक्ने, प्रहरीको कुकुर लिएर बम्जनको कोठामै पुग्दा जे दे'खियो (हे'र्नुहोस् भिडियो) -
[ May 12, 2021 ] बिजय शाहीले काठमाडौँमा घर पा’एपछि पुण्य गौतम च’कित (भिडियो सहित) समाचार
[ May 12, 2021 ] संक्र’मितको घरमै नि:शुल्क एम्बुलेन्स लिएर पुग्छ अब युवासंघ, यि नम्बरमा सम्पर्क गर्नु’होला समाचार
[ May 12, 2021 ] कोरोनावाट जोगीने भन्दै यस्तो उट्प’ट्याङ गर्नेलाई, चिकित्सकले दिए यस्तो चे’तावनी (भिडियो हे’र्नुहोस) समाचार
[ May 12, 2021 ] आज मिति २०७८ साल बैशाख २९ गते बुधबारको राशिफल हे’र्नुहोस् राशिफल
[ May 11, 2021 ] आगामी ३ हप्ता नेपालको लागि अत्य’न्तै कठिन छ, त्यसैले ३ हप्ता दुःख सहेर घरभित्र बसौ : जनस्वास्थ्य विज्ञ डा पाण्डे समाचार
Homeसमाचारजमिन मुनिको मानिस पनि पत्ता लगाउन सक्ने, प्रहरीको कुकुर लिएर बम्जनको कोठामै पुग्दा जे दे’खियो (हे’र्नुहोस् भिडियो)
April 30, 2021 admin समाचार 461
गत असार ४ गते बिहान ४ बजे सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–८ स्थित जंगल क्षेत्र प्रहरीले घे’रा हा’ल्यो। कर’णीको आ’रोप लागेका तपस्वी रामबहादुर बम्जनलाई प’क्राउ गर्ने प्रहरीको यो दोस्रो अप्रे’सन थियो। क’रणीको आ’रोपमा उनकै अनुयायीले सर्लाही जिल्ला अदालतमा मु’द्दा दायर गरेपछि २०७६ माघ २४ गते प्रहरीले पहिलो पटक पक्रा’उ गर्ने प्रयास गरेको थियो। त्यो अप्रे’सन असफल भयो। बम्जनको सिन्धुपाल्चोकस्थित आश्रमबाट चार जना अनुयायी हरा’इरहेका छन्। उनीहरुको अहिलेसम्म कुनै प’त्तो छैन।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–८ मा तवस्वी बम्जनको ‘बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्म आश्रम’ करिब ४० रोपनी क्षेत्रफलमा फै’लिएको छ। यसमध्ये केही बम्जनकै जग्गा हो भने आश्रमको धेरै क्षेत्र सर’कारी जंगल ह’डपेर बनाइएको छ। पहिलो अ’प्रेसन असफल भएपछि चार महिना लगाएर थप अनुस’न्धान गरेको प्रहरी अतिरिक्त द’लबल लिएर त्यहाँ पुगेको थियो। प्रहरीले सो अप्रेसनका लागि दुईवटा कुकुर समेत प्रयोग गर्यो– एउटा ‘ट्रयाकर’ र अर्को ‘रेस्क्यु’।
अ’प्रेसन टिमसँग सशस्त्र प्रहरीको लाइभ डिटेक्टर मेसिन र त्यससम्बन्धी विज्ञ टोलि पनि थियो, जसले जमिन मुनिको मानिस पनि प’त्ता लगाउन सक्ने प्रहरीको भनाइ। तपस्वी भनेर चर्चित एकजना बम्जनलाई प’क्राउ गर्न बिभिन्न युनिटका गरी १२० प्रहरी सो जं’गल क्षेत्रमा पुगेका थिए।
‘पहिलो पटक पक्रा’उ गर्न जाँदा प्रहरीबाट धेरै त्रु’टि भएका कारण बम्जनको आश्रमस्थलसम्म पनि नपुगी फ’र्किनुपरेको थियो’, अप्रेस’नमा खटिएका एक जना प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले, दोस्रो पटक थप त’यारी गरेर त्यहाँ पुगेका थियौं।’
प्रहरीले त्यहाँ पुग्नु पहिले नै बम्जनको सम्प’र्कमा रहेका व्यक्तिको पहि’चान गरिसकेको थियो। मोवाइल सम्पर्कका आधारमा बम्जन रहेको क्षेत्र सुनिश्चित गरेर प्रहरी त्यहाँ पुगेको हो। त्यहाँको स्थानीय समुदायले बम्ज’नलाई धर्मगुरु मान्ने भएकाले उनलाई प’क्राउ गर्दा प्रहरीमाथि नै आ ‘क्रमण हुनसक्ने आँकलन थियो।
त्यहीअनुसार ह ‘तिया’र सहितको टोली साथमै थियो। संभवतः बम्जन निवा’समा लामो समयदेखि नब’सेकाले हुनसक्छ ट्रयाकर डगले पनि उनको सं’केत पाउन सकेन। प्रहरीको भनाइमा त्यहाँको भौगोलिक संरचनाका कार’ण कुकुरले काम गर्न सकेनन्।
घनाजंगलभित्र छरिएका संर’चना प्रहरीलाई पत्ता लगाउनै गाह्रो पर्यो। त्यसमाथि गौंडा गौंडामा सञ्चार से’टसहितका बम्जनका बडिगार्ड तैनाथ थिए। ठूलो संख्यामा प्रहरीलाई देखेपछि उनीहरुले माछा मा’र्न नदिनका लागि आफूहरुले ग’स्ती गरेको बताए।
सो क्षेत्रमा बम्जनका अनुयायी बाहेकलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन। गस्ती टोली रहेको ठाउँबाट ५ देखि ७ मिनेट पैदल अगाडि बढे’पछि प्रहरी एउटा आश्रममा पुग्यो। र, त्यतिनै अगाडि बढ्दा महिला अनुयायीहरु बस्ने आश्रममा।
प्रहरीका अनुसार त्यहाँबाट थप १० मिनेट अगाडि बढेपछि घोडाको तबेला रहेको स्था’नमा पुगिन्छ। त्यसपछि उकालो लागेपछि आउँछ बम्जनका विदेशी अनुयायी बस्ने आश्रम। जंगलभित्र आ’श्रमका यस्तै बिभिन्न संरचनाहरु छरिएका छन्।
प्रहरीलाई यहाँभित्रका यस्ता संरचनाहरु पत्ता लगाउनै हम्मे’हम्मे पर्‍यो। बम्जनका लागि सामान ल्या’उने लैजाने व्यक्ति प्रहरीले पहिले नै पत्ता लगाएको थियो र उ’नैमार्फत् बम्जन रहेको स्थानमा पुग्ने प्रहरीको योजना थियो।
बिहान ४ बजेबाट अप्रेसन थालेको प्रह’रीले ती व्यक्तिलाई ११ बजेमात्रै भेट्यो। सिधै जाँदा थाहा पाउलान् भनेर पछा’डीपट्टिबाट बम्जन रहेको भनिएको भव’नतर्फ प्रहरी अगाडि बढ्यो। करिब २ घण्टा हिंडेपछि बल्ल प्रहरी त्यो स्थानमा पुग्यो।
त्यहाँ लामो”लामो कपाल पालेका, ट्याटू खोपेका पाँचजना युवाहरु भेटिए। कटेजमा बसेका तिनै युवाहरु नै हुन् जसले अन्य व्यक्तिलाई बम्जनसँग भेट गराउँछन्। कसलाई बम्जनसँग भेट गर्न दिने र कसलाई नदिने भन्ने उनीह’रुकै हातमा हुन्छ। आश्रम क्षेत्रभित्र रहेका अन्य व्यक्तिभन्दा उनीहरु फरक थिए। जुडो, कराँते खेल्ने ठाउँ पनि रहेको आश्रमभित्र कपाल पाले’का उनीहरु ५ जना मात्रै भेटिए।
‘त्यहाँ भेटिएका एक युवा पहिले गौं’डामा बस्थे, अहिले उनले बम्जनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पाएका रहेछन्,’ अप्रेसनमा स’हभागी एक प्रहरीले भने। उनीहरुलाई प्रहरीले सोध्यो, ‘बम्जन कहाँ छन्?’ उनीहरुको एउटै ज’वाफ थियो। जुन जवाफ प्रह’रीले जंगल प्रवेश गर्ने बेलादेखि नै सुन्दै आएको थियो, ‘हामीलाई केही थाहा छैन। उहाँ त ध्यानमा हुनुहुन्छ। उहाँले दर्शन गर्न चाहेमा मात्रै भेट्ने हो।’ आश्रमका अनुयायीहरुले पनि प्रहरीलाई बम्जनबारे कुनै जान’कारी दिएनन्।
एक अनु’यायीको भनाइ उधृत गर्दै अप्रेसनमा संलग्न अर्का एक प्रहरी भन्छन्, ‘उहाँ साक्षत भग’वान हो, यो श्रृष्टि गर्नका लागि उहाँ आउनु भएको हो। तपाईंहरु पापी मन लिएर आउनु भएकाले भेट्न सक्नुहुन्न।’ उनीहरुले प्रहरीलाई पवित्र मन लिएर आ’एमात्र भेट्न सक्ने बताए।
‘उहाँ त रुखको टुप्पोमा हुन सक्नुहुन्छ, पानीमा हुन सक्नुहुन्छ, अन्त’रध्यान हुनुहुन्छ,’ अनुयायीहरुले प्रहरीलाई व्याख्या गरे, ‘तपाईंहरु पापी हुनुहुँदो रहेछ, तपाईंहरुलाई २१ दिनभि’त्रमा पाप लाग्छ, तपाईंहरु राक्षस हो। त्यही का’रण उहाँलाई भेट्न सक्नुहुन्न।’
प्रहरीका अनुसार आश्रमभित्र ५०–६० जना अ’नुयायी छन्। अप्रेसनको क्रममा प्रहरीले अनुयायी बस्नेदेखि बम्जन बस्ने भनिएको कोठासम्म सबै क्षेत्र खोज’तलास गर्‍यो, कुकुर र उपकरणहरू पनि प्रयोग गरे। तर बम्जन कहाँ छन् भन्ने कुनै सुइँको पाउन सकेन। दिउँसो दुई बजेसम्म केही पत्ता नलागे’पछि झण्डै डेढ घण्टा लगाएर छरिएका प्रहरी एक ठाउँ भेला भएर फर्किए।
प्रहरीको यो अप्रे’सनसँगै बम्जनले प्रयोग गर्ने टेलिफोन नम्बर परिवर्तन भइसकेको छ। बम्जन र उनका सहयोगीले प्रयोग गर्ने १५ वटा मोवाइल नम्बर प्रहरीले ट्रयाक गरेको थियो। ती नम्बर अहिले प्रयोगमा छैनन्। त्यसो त बम्जनबारे प्रहरी अनुसन्धान अहि’लेलाई थाँति रहेको छ।
अदालतले उनको बारास्थित घरमा गत साता अदा’लतमा उपस्थित हुन म्याद टाँसेको छ। बम्जन आफैं अदालतमा उपस्थित भएनन् भने अदालतको फै’सला नभएसम्मका लागि प्रहरीले प’क्राउ गर्न पाउने छैन। हेरौं प्रहरीले बम्जनको आश्रममा गरेको अ’प्रेसन भिडियोमा: इताजाखबर बाट
सार्वजनिक स्थानमा प्रधानमन्त्रीको फोटो मोबाइल फोनबाट खि’च्न नपाइने
March 25, 2021 admin समाचार 960
प्रधानमन्त्री सह’भागी सार्वजनिक कार्यक्रममा मोबाइल फोनबाट फोटो–भिडियो न’खिच्न सूचना दिइएको छ । ललितपुरको जावला’खेलस्थित स्टाफ कलेजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोष’णा गर्ने कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका’ उपसचिव प्रदीप कुमार भट्टराईले कार्यक्रम
February 27, 2021 admin समाचार 1869
नेपाली सुगम क्षेत्रेकि लो’कप्रिय गायिका अन्जु पन्त दोहोरीमा पनि निरन्तर आउन थालेकी छिन सोहि का’रण पनि हुन् सक्छ जाले रुमालमा अन्जु पन्त अ’नुबन्धित भएकी हुन्। नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रका एक प्रसिद्ध सर्जक तथा गायक हुन्
आफ्नो पेटको बच्चालाई अ’भिनेत्री प्रीयंका कार्कीले यसरी खु’वाईन् जुस
May 3, 2021 admin समाचार 305
नेपालमा सिने क्षेत्रका अभि’नेत्रीहरु विविध कारणले चर्चामा आईरहन्छन् । कोहि नरा’म्रा काम वा आलोचना हुने विवादिन कार्य गरेर भने कोहि राम्रा कामले चर्चामा आउने गर्छन् । यस्तै स’दाबहार चर्चामा रहिरहने नायिका हुन प्रीयं’का कार्की ।
कोरोनावाट जोगीने भन्दै यस्तो उट्प’ट्याङ गर्नेलाई, चिकित्सकले दिए यस्तो चे’तावनी (भिडियो हे’र्नुहोस)
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (172945)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (166801)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (166426)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (166242)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (165284)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (163903)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (163442)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (161915)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (156653)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145508)